အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ | မေတ္တာရိပ်
← ပဋ္ဌာန်း (၂၄ ပစ္စည်း)
၀ယ်ယူဖတ်ရှုရန်သင့်သော အမေးအဖြေကျမ်းများ →
အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ	Posted on August 10, 2009	by mettayate ကက်ဆက်ခွေကတဆင့် စီဒီပေါ်တင်ထားလို့ တချို့နေရာမှာ အသံတွေ မတည်ငြိမ်၊ ပျက်တာများရှိပါတယ်။ သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်နှင့် ကောင်းသောအခွေများ တွေ့ရင် ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
နိဗ္ဗာန် ၃ မျိုး
စုန်လမ်း ဆန်လမ်း ၀ိပဿနာရှုပွားနည်း မေတ္တာအစွမ်း အံ့မခန်း ပ
မေတ္တာအစွမ်း အံ့မခန်း ဒု
CD2အရှုံးမရှိသော ဒဿန
၉၁ ကမ္ဘာက ၀ဋ်ကြွေး ပ
၉၁ ကမ္ဘာက၀ဋ်ကြွေး ဒု
ဗုဒ္ဓဟောကြား ကြီးပွားကြောင်းတရား CD 3
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၁ – ဘာကြောင့် ၀ိပဿနာ အားထုတ်သင့်သလဲ။
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၂ A – ဘေးကြီး (၄) ပါး၊ ကုသိုလ် (၄) မျိုး။ , ၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၂ B – လှေခါး ၃ ထစ်
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၃ – ပုဂ္ဂိုလ် (၄) မျိုး ၊ ရုပ်ဓါတ် (၈) ပါးအကျဉ်း ။
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၄ – နိဗ္ဗာန် ဂုဏ်ရည် (၃၀) ပုဒ်၊ ကိုယ်တွေ့ (၃) မျိုး၊ သမာဓိ (၃) မျိုး။
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၅ A – မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး၏ သုဒ္ဓ ၀ိပဿနာ ရှုသင့်ကြောင်းနှင့် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဟောကြားချက် ၊ အာရုံ ၆ ပါး အကျယ် ခွဲခြားပုံ။
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၅ B – ဓါတ်ကြီးလေးပါးမှ ပထ၀ီဓါတ် အစ။
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၆ A – သောတာပန်တည်ရန် လိုအပ်သော အင်္ဂါ (၄) ချက် ၊ ပထ၀ီဓါတ် အကျယ် ဟောကြားမှု။
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၆ B – ပထ၀ီဓါတ် နှင့် အာပေါဓါတ် အကျယ် ဟောကြားမှု။ ၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၇ – အာပေါဓါတ်နှင့် ၀ါယောဓါတ် ဟောကြားမှုနှင့် ခန္ဓာ(၅)ပါး ခွဲခြားပုံ။
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၈ – ခန္ဓာ (၅) ပါး ဖြစ်ပုံပျက်ပုံ၊ ဓါတ် (၁၈) ပါး မှ ဓါတ်(၉)ပါး ဟောကြားမှု။
CD4၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၉ – ပါရမီ နှင့် ပတ်သက်၍ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် မိုးးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆုံးမချက်များ၊ ဓါတ် (၁၈) ပါးမှ ဓါတ် (၉) ပါး အဆက်၊ ခန္ဓာ ၅ပါး ဘာကြောင့် ဖြစ်လာရတာလဲ။
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၁၀ – ခန္ဓာ (၅)ပါးဖြစ်မှုကို ရှင်းလင်းပုံ၊ မဂ်တားဖိုလ်တား အန္တရာယ်(၅)ပါး။
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၁၁ A – ကိလေသာ (၁၀) ပါး။ ၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၁၁ B – ဒိဋ္ဌိ ခွာပြပုံ။
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၁၂ – နောင်ဘ၀တွင် သောတပန်တည်မည့် (၄)မျိုး၊ လက္ခာဏာ(၃)ရပ်- အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနိတ္တ အသေးစိတ်ရှင်းပြရှုပွားပုံ။
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၁၃ – ကိလေသာ အဆင့် (၃) ဆင့်၊ သောတပန်၏ ဂုဏ်ရည် (ပ)။
၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ၁၄ – သောတပန်၏ ဂုဏ်ရည် (ဒု) ၊ တရားထိုင်ခြင်းဖြင့် ခန္ဓာ ၅ ပါး ဖြစ်ပျက်ပုံ ရှုနည်း။
ဗာဟိယ သုတ္တန် ပ
ဗာဟိယ သုတ္တန် ဒု
CD5ဓမ္မဓိဌာန် ဘာသာရွေးနည်းတရား
မျက်ရည်မကျခင် သိစေချင် (ပ)
မျက်ရည်မကျခင် သိစေချင် (ဒု)
မျက်ရည်မကျခင် သိစေချင် (တ)
ပဌာန်း၊ ပစ္စယနိဒ္ဒေယ – အနက်အဓိပ္ပါယ် သညာသိ နှင့် ပညာသိ
အာရုံ ၆ ပါး
မဂ်ဖိုလ်ရခြင်း မရခြင်း၊ ပရမတ်တရားခွဲခြင်း
ပါရမီထိုက်သော ဒါန နှင့် ပါရမီမထိုက်သော ဒါန
သညာသိ နှင့် ပညာသိ
ရုပ်ဓါတ် ၈ ပါး
မိရိုးဖလာ ဘာသာဝင် နှင့် တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
မဂ်တား ဖိုလ်တား အန္တရာယ်များ ၁
မဂ်တား ဖိုလ်တား အန္တရာယ်များ ၂
အားကိုးရာ အမှန် ၁
အားကိုးရာ အမှန် ၂
ဗုဒ္ဓ အလိုကျ ဒါနပြုနည်း
ဖန်ဆင်းရှင် သုံး ဦး
သင် လူသား ဖြစ်ပြီလား
ဗုဒ္ဓဘသာဝင်အတွက် အခြေခံ ၂ ချက် ဗုဒ္ဓအလိုကျ
ငါးပျံတစ်လှည့် ဗုံပျံတစ်လှည့် (ပ)
ငါးပျံတစ်လှည့် ဗုံပျံတစ်လှည့် (ဒု) ဗေဒင် နှင့် တရား
CD 8 ဂုဏ်တော်အစွမ်း အံ့မခန်း
ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်း အကြောင်းရင်း ၁
ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်း အကြောင်းရင်း ၂
ပါရမီထိုက်သောဒါန နှင့် ပါရမီမထိုက်သောဒါန
CD9သရဏဂုံ ၃ ပါး
အဖြစ်မှန် ငါး မျိုး
သစ္စာလေးပါး အပိုင်း (၁) သစ္စာလေးပါး အပိုင်း (၂) သစ္စာလေးပါး အပိုင်း (၃) သစ္စာလေးပါး အပိုင်း (၄) သစ္စာလေးပါး အပိုင်း (၅)
သစ္စာလေးပါး အပိုင်း (၆)
သစ္စာလေးပါး အပိုင်း (၇)
အပိုင်း (၁၉) အပိုင်း (၂၀)
This entry was posted in တရားတော်များ and tagged အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်)ရွှေပြည်သာ. Bookmark the permalink.	← ပဋ္ဌာန်း (၂၄ ပစ္စည်း)
One Response to အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ
kyann kan kaung says:	July 20, 2013 at 6:35 am	ပဌာန်း၊ ပစ္စယနိဒ္ဒေယ – အနက်အဓိပ္ပါယ်
ဒေါင်းလို့မရပါ ပြန်တင်ပေးစေချင်ပါသည် ကျေးဇူးတင်ပါသည်.